Samsung ကဂီယာ VR Apps ကပ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် »7Samsung ကဂီယာ VR Apps နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖြစ်ရမည်
7 Samsung ကဂီယာ VR Apps နှင့်အတွေ့အကြုံများ APK ကိုရှိရမည်
Virtual Reality (VR) ကြှနျုပျတို့၏သောက်ထဲသို့အနာဂတ်အားဖြင့်ဖြောင့်ချပစ်ခဲ့ကြသောနည်းပညာများကိုတဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့အများစုကဘောငျသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ကြင်နာတစ်ယောက်တည်းအတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းယူကြပြီယုံကြည်ဖို့ခဲသည်။
ဒါဟာ5လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်ပို Samsung နှင့် Oculus စမတ်ဖုန်းများက powered ခဲ့သည့်၎င်းတို့၏ပထမဆုံး virtual reality နားကြပ်, ထုတ်လုပ်ရန်ပူးပေါင်းကြောင်းယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းနောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့နောက်ပိုင်းများစွာသောထုတ်ကုန်များနှင့် app များကိုအသုံးပြုသူများတစ်ခုလုံးအသစ်သောအဆင့်မှာ virtual reality ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုတော်မူသောဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
ဒီနည်းပညာကသင်၏စိတ်ကိုမှုတ်ဖို့အလားအလာရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်သည့်အခါအဆိုပါ virtual reality နားကြပ်အရောင်အတွက်အတော်လေး chunky နှင့်အဖြူဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခု Samsung က virtual reality နားကြပ်မြောက်မြားစွာအပြောင်းအလဲများမှတဆင့်သွားပြီနှင့်အဆုံးရလဒ်က Samsung ၏အတော်လေးဂုဏ်ယူဖြစ်ရမည်အရာတစ်ခုခုသည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, သင်သည်မှောင်မိုက်သော virtual reality နားကြပ်, get ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်ထိတွေ့ panel ကနေ, တိကျရွေ့လျားမှု Controller, နှင့် Ergonomics ခေါင်းကိုကြိုးအပါအဝင် features တွေနှင့်အတူထုပ်ပိုးကောင်းပါသည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာစျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံး virtual reality နားကြပ်စေသည်။ ဒါကြောင့်သင်က VR နားကြပ်ကနေတဆင့်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နည်းပညာကိုဦးတည်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူရန်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့သဘာဝကျပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ Samsung ကဂီယာ VR apps များနှင့်နားကြပ်မှတဆင့်သုံးစွဲဖို့လိုအရာအပြင်, သင် virtual reality ဤလောကသို့ခြေလှမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလျှင်လည်းတချို့ apps များနှင့်အတွေ့အကြုံများကို။
ယနေ့ငါတို့သည်သင်တို့၏ Samsung က virtual reality နားကြပ်အတော်လေးဖြည့်စွတ်ထားတဲ့ရုံသူတို့အားအေးမြ apps များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုကြည့်ယူပါ။
Samsung ကဂီယာ VR Apps ကပစာရင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ Skybox
သင်ရုံသင့်ရဲ့ Samsung က virtual reality နားကြပ်ကိုဆည်းပူးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရသောပထမဦးဆုံးအရာ, စဉျးစားကွ? အဆိုပါသိသာအဖြေအချို့ကိုသင်အံ့သြဖွယ် 360 ဒီဂရီဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်လိုသည်။
ထိုမှတပါး, Skybox ရုံလှပသောဗေဒအတူပါလာပေမယ့်လည်းတစ်ဦးအလိုလိုသိ UI ကိုရှိပါတယ်မထားတဲ့အရည်အသွေးမြင့် 360 ဒီဂရီဗီဒီယိုများ, နှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးအကြောင်းအများကြီးဂရုစိုက်ဟန်သော applications များ, တစ်ခုဖြစ်သည်။ Skybox ဟာ 360 ဗီဒီယိုကြည့်အဖြစ်နှစ်သက်အဖြစ်သင့်ဗီဒီယိုများရွေးချယ်ရာတွင်၏အတွေ့အကြုံကဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ချိခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံး virtual reality ကိုဗီဒီယို loader မှဖြစ်ပါတယ်။
ဤလျှောက်လွှာကိုကျိန်းသေ nauseating grainy သောအစောပိုင်း 360 ဒီဂရီဗီဒီယိုများကနေကြီးမားတဲ့ခုန် ယူ. , မိန်းမောစုဆောင်းခြင်းနှင့်အကွာအဝေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌မရှိခဲ့ပေ။ ဤလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကလုံးဝအခမဲ့ကြောင်းပါ! ဤသည်ဤလျှောက်လွှာကိုတစ်ဦးအားလုံး virtual reality နားကြပ်အသုံးပြုသူများသည်၏စာကြည့်တိုက်အတွက်ရှိရမည်စေသည်။
2 ။ Phonecast
virtual reality နားကြပ်အသုံးပြုသူများကအရာအားလုံးထက်ထက်ပိုချစ်ကြလိမ့်မည်သည့်အရာတစ်ခုမှာ, သူတို့ရဲ့ virtual reality နားကြပ်နှင့်အတူနေ့စဉ်ကွန်ပျူတာလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အားလုံးပယ်ရှားကြောင်းအိပ်မက်ရရှိထံမှနေဆဲအချို့သောကြီးမားသောခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအတော်လေးသိသာသည်ကာလတွင်အပြင်, ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ဖြစ်စေကြောင်းဝေးကနေမရှိကြပေ။
ထိုအ Phonecast ့ထေူတထိုကဲ့သို့သော App ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုသူတို့ရဲ့ virtual reality နားကြပ်ကိုသုံးနေစဉ်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းအပေါ်အချို့သောအခြေခံအင်တာနက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုတဆင့်သင်အသိဥာဏ်ထွင်းထုကို web applications များတစ်ခုတစ်ခုလုံးကို suite ကိုမှအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဒိုင်ခွက်, access နိုင်ပါတယ်။
YouTube မှကို web browser များထံမှအချို့ကိုသင်ကန့်သတ်အောက်ပါနေချိန်မှာသင်အလိုရှိသမျှကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအလားအလာ virtual reality အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အနာဂတျအတှကျရရှိထားသူဘယ်လောက်၏အကြီးမားဆုံးအရိပ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
3 ။ Netflix နဲ့ VR
Netflix နဲ့ 360 ဒီဂရီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ option နဲ့အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးသောပထမဦးဆုံးအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုဆီးနှင်း၏မြင်ကွင်းကိုထွက်ကျသွားပြသတဲ့ပြတင်းပေါက်အတူပျူငှါနွေးထွေးသောမှတ်တမ်းအခန်းအတွင်းသက်သာအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်အသုံးပြုသူရှိပါတယ်တဲ့မဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
ထိုအသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံး streaming များဝန်ဆောင်မှုများကိုလျှောက်လွှာအပေါ်အကောင်းဆုံးပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်အချို့ကိုကြည့်နေစဉ်ကြောင့်အားလုံးပျော်မွေ့ရ။ ဤသည် Netflix နဲ့ Chilling ၏ပကတိဖော်ပြချက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ မူရင်းဖြန့်ချိကတည်းကလျှောက်လွှာက၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌မဆိုအဓိကအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံမရှိသေးပါဘူးသို့သော်ယနေ့တိုင်စစ်မှန်သောရရှိထားသူတစ်ဦးအကြီးအတှေ့အကွုံမြားနှငျ့အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးပါသည်။ ဤအတူ virtual reality လျှောက်လွှာသငျသညျကိုတောင်သတိမထားမိဘဲ non-VR ပြပွဲသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုခံစားဖို့ရ!
4 ။ VR က Canvas
သငျသညျတခုအနုပညာသဘောသဘာဝရှိသည်နှင့်သင်သင်သည်သင်၏အနုပညာကျေနပ်အောင်တံ့သော, တစ်ထုံးစံအတွက် Samsung က virtual reality headset ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်နိုင်သည့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးမိလြှငျ, VR က Canvas သင်တို့အဘို့ application ဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်တိုက်တွန်းပါသည်။ ဤလျှောက်လွှာကို Google က, အမှန်တကယ်စောင်း Brush tool ကိုတစ်ဦးက rip-off ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးသည်အလွန်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာကွဲပြားခြားနားသောအနုပညာကိုအပိုင်းပိုင်းကိုဖန်တီးရန်ဤလျှောက်လွှာကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျအခြို့သောအံ့သြဖွယ် tool ကိုရှေးခယျြစရာ, Animation နှင့်အခြားနည်းလမ်းများအပါအဝင်အသုံးပွုနိုငျသောဤလျှောက်လွှာအတွင်းရွေးချယ်မှုများ, များများရှိပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူးနှငျ့သငျ $ 3.99 ၏သေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
5 ။ Gala 360 နှင့် VISO နေရာများ
Gala 360 နှင့် VISO နေရာများကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ခုရှိပါတယ် ခရီးသွား applications များသင်သည်သင်၏ Samsung က virtual reality နားကြပ်မှတဆင့်သုံးနိုငျရာ။ ထိုအပလီကေးရှင်းများနှစ်ဦးစလုံးအတော်လေးသေးငယ်ဖြစ်ကြပြီးတောင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်များ၏သက်သာစွန့်ခွာရန်မလိုဘဲကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်မြင့်တက်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသငျသညျပေးနိုငျသညျ!
ဒီလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေကိုနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပေမယ့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသော features တွေရှိသည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်ရဲ့အိပ်ရာထွက်ခွာမပါဘဲကမ္ဘာ၏အံ့ဘွယ်သောအမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရအဖြစ်သို့သော်လည်းအဆုံးရလဒ်တူညီပါ! ဤရွေ့ကားကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး virtual reality ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကိုဖြစ်ကြသည်။
6 ။ Wevr ပို့ဆောင်ရေး
virtual reality အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော ကျနော်တို့ဒါနှငျ့သငျအဲဒီလိုစဉျးစားပြီးနောက်သင် Wevr ပို့ဆောင်ရေးချစ်ကြလိမ့်မည်ဝေမျှမယ်ဆိုရင်ထင်ပါတယ်။ Wevr ပို့ဆောင်ရေး Wevr ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သေးငယ်တဲ့ကြေးအားလုံးကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးပါရှိသည်။
သင်ဤအားခံစားရလျှင်သင်သည်လည်းတစ်အနုပညာခုန် ယူ. သင့်ကိုယ်ပိုင် virtual reality အတွေ့အကြုံများဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်နည်းနည်းကုန်ကျမယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံများပိုက်ဆံထက်ပိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
7 ။ Minecraft
တစ်ခုတည်းသောအရာကဒီစာရင်းမရှိခြင်းဟာ virtual reality ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် Minecraft တက်ခြေလှမ်းများနှင့့်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထားတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Minecraft ကမ္ဘာကြီးရိုးရှင်းသောထင်ရှားစေခြင်းငှါပေမယ့်ဒါဟာဆယ်စုနှစ်၏အထင်ရှားဆုံးဂိမ်းအမည်ရှိထားပြီးအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ထိုအသင်ရုံကြောင်းကိုသင်၏ virtual reality နားကြပ်၏အကူအညီနှင့်အတူထွက်ရှာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်ယခုရှေ့ဆက်နှင့်ဤ Samsung ကဂီယာ VR Apps ကပ၏အကူအညီဖြင့် virtual reality သို့အပြည့်အဝ emersion ခံစားရသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျကိုအောက်တွင်ချမှတ်ချက်အားဖြင့်အကောင်းဆုံးကြိုက်တယ်ရာတစျခုအကြောင်းကိုသိပါစေ!
Samsung ကဂီယာ VR Samsung ကဂီယာ VR Apps ကပ Samsung က VR Apps ကပ